CRPH က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက် ဒုတိယဝန်ကြီးများခန့်အပ်… – PVTV Myanmar
· 10 months ago ·36 Comments
CRPH က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက် ဒုတိယဝန်ကြီးများခန့်အပ်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အပ်နှင်းလိုက်သည့် အာဏာကို ကျင့်သုံးလျက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁၉/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်အရ၊ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ယှဉ်တွဲပါ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းတို့မှာ
(၁) ဦးမိုးဇော်ဦး – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
(၂) ခူထဲဘူး – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၃) ဒေါ်ခင်မမမျိုး – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၄) နိုင်ကောင်းရွက်(MSICC) – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၅) ဦးချစ်ထွန်း – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၆) မိုင်းဝင်းထူး – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၇) မင်းဇေယျာဦး – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
(၈) နော်ထူးဖော – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(၉) ဂျာထွယ်ပန် – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၀) ဒေါက်တာရွှေပုံ – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၁) ခွန်းဘီထူး – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
(၁၂) ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင် – ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အမျိုးသမီး၊လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
Like – 20K Share – 1808
2021-04-16 at 5:47 PM
Warmly welcome and strongly support NUG.
2021-04-16 at 5:54 PM
2021-04-16 at 5:58 PM
Congrats ပါ ချစ်မ 👏👏👏
အမျိုးသားညီညွတ်​ရေးအစိုးရ (NUG)အား ပြည်သူတစ်​ယောက်အ​နေဖြင့် ကြိုဆို​ထောက်ခံပါတယ်
Khaing Zaw Tun says:
2021-04-16 at 6:17 PM
အပြည့်အဝ ထောက်ခံ ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုပါတယ်…. ဗျာ
2021-04-16 at 6:27 PM
အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရအား ဂုဏ္ျပဳႀကိဆိုပါ၏
2021-04-16 at 6:34 PM
ပြည်သူ အစိုးရ ကြိုဆိုပါတယ်
2021-04-16 at 6:50 PM
Ŝĥwê Pĥyo Lay says:
2021-04-16 at 6:56 PM
Su Latt Wai says:
2021-04-16 at 7:12 PM
2021-04-16 at 7:30 PM
လိႈက္ လိႈက္ လွဲ လွဲ ႀကိဳ ဆို ေထာက္ ခံ ပါ သည္
2021-04-16 at 7:42 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ(NUG) အား ဂုဏ်ယူ စွာဖြင့် ထောက်ခံကြိုဆိုပါသည် ရှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ ကျန်းမာပါစေ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် 💪💪💪
Daw Ou Lay says:
စိတ်ကူး​ကောင်းလိုက်တဲ့မင်မင်​လေး….video​လေး စဖွင့်မိလို့ ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံနဲ့ photoက ရင်ထဲထိတယ်😊
Kkhine Lwin says:
2021-04-16 at 8:11 PM
National Unity Government (အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ)ကိုဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္မည့္တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ေထာက္ခံပါသည္။
2021-04-16 at 8:12 PM
Federal Army and Constitution is required
2021-04-16 at 8:19 PM
Lae April says:
2021-04-16 at 8:32 PM
Congratulations 💗💗💗National Unity Government (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ)ကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်မည့်တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ထောက်ခံပါသည်။
2021-04-16 at 8:51 PM
We suppor always wellcome NUG congratulation CRPH
2021-04-16 at 9:00 PM
Thank you CRPH for giving us so many hopes deep from my heart !
2021-04-16 at 9:08 PM
National Unity Government အစိုးရအား
100 % အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါသည်။
Kýâw Žîń says:
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရ(NUG) အား ဂုဏ္ယူ စြာျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလုံး ေဘးကင္းၾကပါေစ က်န္းမာပါေစ အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္ 💪💪💪
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ(NUG) အား ဂုဏ်ယူ စွာဖြင့် ထောက်ခံကြိုဆိုပါသည်💪💪💪
(NUG)အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး အစုိးရအား အျပည့္ဝေထာက္ခံပါသည္
2021-04-16 at 9:23 PM
ဖားစည္သံေဝ ေဒါနေျမ says:
အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရအား ဂုဏ္ယူစြာ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္
2021-04-16 at 11:00 PM
2021-04-17 at 1:16 AM
NLD. နဲ့ GZ
ယခုထိ တစ်ယောက်တောင်မှ မရှိတော့ဘူးလား
ပေါ့။ ဘယ်သူတွေပဲ အစိုးရတက်လာသည်ဖြစ်
စေ မွတ်စ်လင်မ်တွေထဲက ဘယ်သူ့ကိုတော့
တယ်ဆိုပြီး မတွေ့ရလို့ပါ။ ကိုယ်ကလည်းဘာသာ
ပြီး မွတ်စ်လင်မ်ဝန်ကြီးက ဒီဘက်ခေတ်မှာမမြင်ရ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)နှင့်အတူ သမ္မတ၊ဒုသမ္မတ၊နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ၊၀န်ကြီး၊ဒု၀န်ကြီးများအားလုံးကို အပြည့်အဝထောက်ခံ ကြိုဆိုပါတယ်♥🥰အရေးတော်ပုံ အောင်တော့မည်😊👊👍
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအား ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် လက်ခံကြိုဆိုပါတယ် 👏👏👏
2021-04-17 at 8:35 PM
2021-04-20 at 2:31 PM